Vaovao - Fananganana sehatra mavesatra
Fananganana sehatra mavesatra ny adidy, ampitahao amin'ny fiakaran'ny tsanganana finday, afaka mamela sy miala haingana. Ny ankamaroan'ny sanganasa amin'ny fiara ara-barotra dia fitsapana sy fikojakojana tsotra, izay tokony ho vita haingana. Miaraka amin'ny fananganana Platform, ny mpandraharaha dia afaka miatrika mora foana ireo sanganasa ireo, izay afaka mamonjy ny fotoananao maro. Ny Platform Lift dia azo ampiharina amin'ny fivoriambe, fikojakojana, fanamboarana, fanovana solika ary fanasana fiara ara-barotra isan-karazany (bus ao an-tanàna, fiaran'ny mpandeha ary kamio afovoany na mavesatra).
Satria izy irery no matihanina mpamokatra fiara mifono vy any Shina, ary ny mpamokatra fiakarana fiakarana fiara manerantany dia mamolavola MAXIMA ary manao ny fiakarana voalohany amin'ny taona 2016.
Ny fampiakarana MAXIMA Platform dia manana rafitra hafahafa fananganana hydraulic mitsivalana sy fitaovana fanaraha-maso mifandanja tsara mba hiantohana ny fampifangaroana tanteraka ny varingarin-tsolika sy ny fisandratana miakatra sy midina.
Taorian'ny fampandrosoana efa an-taonany maro, ireo injenierantsika matihanina dia manavao hatrany ny famolavolana ny fananganana ny lampihazo sy ny kojakoja mifandraika amin'izany. Faly ny manambara fa, MAXIMA dia afaka manangana ny sehatra eto an-tany sy eto an-toerana ankehitriny. Ny halavan'ny fiakaran'ny lampihazo dia mety ho 7 metatra, 8 metatra, 9 metatra, 10 metatra ary 11.5mèter. MAXIMA ihany koa dia nanamboatra ny lampihazo tamin'ny fantsom-batana mavesatra, izay mety ho 12,5Tons isaky ny set.
Tamin'ny taona 2018, ny fampiakarana ny sehatra MAXIMA dia nomem-boninahitra ho an'ny orinasa mpanamarina Israel. Nanomboka tamin'izay, andiany folo ny fampiakarana sehatra MAXIMA no natolotra ho an'ny tafika Israel. Ary tamin'io taona io ihany, nomem-boninahitra ny fiakaran'ny sehatra MAXIMA hahazo mari-pankasitrahana CE.
Mieritrereta fiakarana fiara mifono varotra, eritrereto MAXIMA. Miaraka amin'ny vokatra tsara kalitao, sy serivisy afrikanina matihanina avy any MAXIMA sy mpizara eto an-toerana, MAXIMA dia hanamora ny asanao. Isaky ny mila fanampiana ianao, MAXIMA dia eo am-pelatananao foana. Mamela anay hanome anao torohevitra sy vahaolana matihanina hifanaraka amin'ny fangatahana rehetra, antsoy izao 0086 535 6105064.